Jab weyn oo soo gaaray al-Shabaab toddobaadyadii lasoo dhaafay
Jab weyn oo la taaban karo ayaa soo gaaray ururka dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo jabkaas uu sare u qaaday dhibaatooyinka ururka ee ay ka mid yihiin dhaqaale la’aan iyo niyad-jab soo wajahday ururka.
Toddobaadkii lasoo dhafay, 87 xubnood oo ka tirsanaa ururkaas ayaa lagu dilay kaddib markii ururku isu dayay inuu weerar ku qaado salhig ay lahaayeen ciidammada xoogga dalka oo ku yaallo Baar-Sanguni ee Jubbada Hoose. Dhanka kale, ururka al-Shabaab wuxuu isaga baxay saldhigyo uu ku lahaa gobalka Baay kaddib markii ciidammada xoogga dalka ay ku qaadeen weerarro loogu talo galay in ururka lagaga saaro dalka Soomaaliyeed. Weerarkaas waxaa lagu dilay hoogaamiye ka tirsanaa al-Shabaab oo lagu magacaabo Dhufow.
Magaalada Baardheere waxaa sidoo kale lagu qabtay hubab loo waday ururka dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab kuwaasoo saarnaa gawaari. Sarkaal ka tirsan ciidammada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay qabteen gawaaridaas sitay hubab loo waday al-Shabaab. Sida ay sheegeen sarkaallada dowladda, dhowr tuhmaniyeel ayaa lagu xiray goobtaas. Dowladda Soomaaliyeed waxay si joogta ah uu burburineysaa ururka al-Shabaab iyo xubnohooda eek u sugan dhammaan dalka waxayna dadka ka faallooda amniga saadaalinayaan in lagu gudo jiro xilliyadii uu ururka baaba’i lahaa.
Xorriyo 2 Views : 128
Xorriyo 1 Views : 9537